Apple dia namoaka Beta fahefatra an'ny macOS Sierra ho an'ny Developers | Avy amin'ny mac aho
Omaly tolakandro, na dia volana aogositra aza izay fialan-tsasatry ny ampahany betsaka amin'ny vahoaka, Ny injenieran'ny Apple dia namoaka beta be dia be tamin'ny rafitra fiasa rehetra izay ho tonga amin'ny kinova farany amin'ny volana septambra. Toy ny mahazatra dia nijanona tsy nisy fialantsasatra indray ireo injeniera, zavatra nahazatra azy ireo tamin'ny famoahana ireo kinova farany an'ny rafitr'izy ireo tamin'ny volana septambra ary tamin'io daty io dia tsy maintsy mandefa betsa samy hafa izy ireo mandra-pahatapitry ny fandidiana.
Taorinan'ny fivoarana mahazatra an'ireo kinova ireo dia namoaka betsa samihafa an'ny iOS 10 ry zalahy ao amin'ny Apple 3, watchOS 10, tvOS XNUMX ary macOS Sierra, izay tena tianay tokoa. Ity beta fahefatra ity ho an'ny mpamorona tonga roa herinandro aorian'ny fandefasana ny beta fahatelo ary volana nanambady aorian'ny fanombohan'ny beta voalohany, natomboka tamin'ny 13 Jona taorian'ny nifaranan'ny Konferansa ho an'ny Developer 2016. Azontsika atao ny misintona mivantana ity fanavaozana vaovao ity avy amin'ny Mac App Store na mivantana amin'ny alàlan'ny foiben'ny developer Apple.
Anisan'ireo fiasa vaovao misongadina indrindra amin'ny macOS Sierra hitantsika: Siri, farany niantsona tamin'ny Mac, rehefa niandry nandritra ny taona maro. Siri dia mamela antsika hanao ireo asany mitovy izay azontsika atao amin'ny iPhone ankehitriny, na dia misy aza ny fisokafan'ny mpamorona antoko fahatelo dia azo inoana fa afaka mahazo bebe kokoa amin'izany isika amin'ny ho avy.
Ny iray amin'ireo zava-baovao manan-danja amin'ny macOS Sierra dia misy ifandraisany amin'ny iCloud. Ireo rakitra sy antontan-taratasy izay tahirizinay amin'ny birao dia ho hita amin'ny fitaovana rehetra miaraka amin'ny iCloud. Ny zava-baovao lehibe hafa izay hoentin'ilay kinova fandidiana manaraka ho an'ny Mac ho antsika dia ny fahafahana mandoa vola amin'ny alàlan'ny Apple Pay mivantana avy amin'ny tranokalanay Safari, manamarina ny fividianana amin'ny alàlan'ny iPhone na Apple Watch.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Sierra » Apple mandefa beta fahaefatra an'ny macOS Sierra ho an'ny mpamorona
Miarahaba anao, manana IMAC aho tamin'ny 27 faran'ny 2013 ary simba ny efijery ary avy eo vaky, alohan'ny nanimbany ilay imac dia niasa tamina monitor ivelany ary niasa tsara. Aorian'ny vaky dia matahotra ny mampifandray azy amin'ny solaitrabe aho satria mety hiteraka fohy izany, ny olana dia satria nesoriko ny monitor lehibe avy amin'ny solaitrabe dia mandeha ny processeur ary lasa miadana be ny solosaina. Misy fomba iray hanapahana azy io ary hiasa amin'ny monitor ivelany ihany ary mety amiko izany? Ny eritreritro dia ny hoe amin'ny monitor ivelany dia misy karazana sensor sy ny board, fa tsy ny fahitana azy, no mitarika ilay processeur. Tampoka raha afaka manafoana azy aho amin'ny toerana BIOS toy ny Windows. Tiako ny fanampian'ny manam-pahaizana. Amin'izao fotoana izao dia tsy manam-bola hividianana vaovao aho, saingy mila mametraka ny fitaovako hiasa. Misaotra betsaka.
Raha manana iPad 2, 3 na 4 aho, tokony hanavao ny fitaovako ho an'ny Pro ve aho?